घोडा खुवाउने | Noti Horses
La खुवाउने घोडा को एक आधारभूत तत्व छ कि जनावरहरु राम्रो देखभाल गरीएको छ र स्वास्थ्य समस्या छैन। तसर्थ, कस्तो खालको खाना थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ हामी घोडाहरूको सम्बन्धमा खरीद गर्न वा खातामा लिन सक्छौं।
प्रकारहरू खाना र सामान पनि हामीले हाम्रो जनावरहरूको ख्याल गर्नुपर्छ। हामी यो बिर्सन सक्दैनौं कि कहिलेकाँही उनीहरूसँग पौष्टिक समस्याहरू हुनसक्छन् जुन ध्यानमा राख्नुपर्दछ र जहिले पनि पशुचिकित्सकको विवेकको साथ। सबै भन्दा राम्रो ब्राण्ड र खुवाउन सबै भन्दा राम्रो सामग्री सबैभन्दा उत्तम तरिकामा घोडा।
तपाईले यी सबै र धेरैमा यस ठाउँमा फेला पार्नुहुनेछ, सँधै यसको सम्बन्धमा घोडालाई खुवाउँदै।
Jamelgo: यसको अर्थ र यसको प्रयोगहरू के हो
द्वारा जेनी मोंगे बनाउँछ3वर्ष .
आजको लेखमा हामी "नाग" शब्दको बारेमा कुरा गर्नेछौं। धेरै लेखहरूमा हामी स्पष्ट गर्दै छौं ...
घोडा जई, तिनीहरूको आहारमा परम्परागत घटक
हाम्रो घोडालाई खुवाउनु भनेको केहि चीज हो जसले हामीलाई चिन्ता गर्दछ। कुन अनुपातमा दिने? के खनिजहरू प्राप्त गर्छन् ...
त्यो घोडा खान्छ?
द्वारा मोनिका सान्चेज बनाउँछ5वर्ष .
त्यो घोडा खान्छ? के तपाईंले भर्खर घोडाको अधिग्रहण गर्नुभयो वा ग्रहण गर्नुभयो र के तपाईं यो सदाका लागि स्वस्थ हुन चाहनुहुन्छ? तापनि…
प्रोटिन घोडा को लागी महत्वपूर्ण छ?
घोडाले यसको आहारमा चारा समावेश गर्नुपर्दछ। विशेष गरी प्रतिस्पर्धा मा घोडा। यो अधिक छ ...
खुवाउँदा र घोडामा कोलिक
खाना आफैंले घोडामा कोलिकसँग हस्तक्षेप गर्दैन, तर इन्टेक र ...
एक प्रतियोगिता घोडा कसरी खुवाउने
एक सक्रिय घोडा को खुवाउने आहार जुन विभिन्न विषयहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्दछ ...
कसरी उचित पोषण को माध्यम बाट तनाव कम गर्न
घोडा आफैंमा एक स्नायु जनावर हो धेरै तनावको खतरामा, विशेष गरी यो क्षणबाट ...
इक्वाइन पोषण: फाइबर
द्वारा एन्जेला ग्रेका बनाउँछ 8 वर्ष .
फाइबर घोडाको आहारमा बिल्कुलै आवश्यक छ। यो हास्यास्पद छ, किनभने हाम्रो लागि पाचनका लागि महत्त्वपूर्ण छ, ...
घोडा मा कोलिक को कारणहरु
द्वारा डानिग्राफी बनाउँछ 10 वर्ष .
घोडा मा सबै भन्दा आम रोग को एक कोलीक वा पेट दर्द संग गर्न को लागी, हुनु ...
घोडाको उपस्थिति सुधार गर्नका लागि तरिकाहरू
द्वारा डानिग्राफी बनाउँछ 11 वर्ष .
धेरै चालकहरू चाहन्थे कि उनीहरूका घोडाहरू जहिले पनि भव्य देखिन्, उनीहरू फिल्महरूमा जस्तै देखिन्छन् ...